Waxyaabaha mideeya Muslimiinta iyo Yuhuudda Europe - Worldnews.com
Dadka muslimiinta ah iyo kuwa Yuhuudda ah ee ku nool waddamada qaaradda Europe ayaa laga yaabaa ineysan inta badan fool-ka-fool isku arkin, laakiin waayadii dambe waxay isugu yimaadaan si ay uga hor tagaan arrimo sharciga ku saabsan, kuwaasoo ay sheegeen iney saameynayaan madax bannaanidooda ku aaddan waxyaabaha diinta ku
"waxaa si shaki la'aan ah dib loogu soo gocanayaa sida uu dhaqanka dunida ahaa wixii ka horreeyay dagaalkii 2-aad ee adduunka, marka la eego sharciyadan hadda soo ifbaxaya"
Sheekada gabar ka baxsatay nolosha Sacuudiga
Waxay ahayd sheeko dunida qabsatay, taas oo sababtay in wax la iska weydiiyo xayiraadaha saaran haweenka u dhashay dalka Sacuudiga. Rahaf Mohammed al-Qunun, oo 18 jir ah,...
Maxay tahay sirta ku jirta wareysi uu bixiyay Sisi oo ay Masar dooneyso inuusan hawada galin?
Telefishinka CBS ee uu fadhigiisu yahay waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu ku gacan seyray codsi uga yimid dowladda Masar, oo dooneysa inuusan hawada galin wareysi ay ka...
Jamaal Khaashuqji: Su’aalaha aan wali laga jawaabin 100 casho ka dib dilkiisa
Xilli 100 maalmood laga joogo dilkii wariyihii u dhashay dalka Sacuudiga ee Jamaal Khaashuqji, wali waxaa jira arrimo aan faahfaahintooda la ogaanin oo ku saabsan qaabkii...
Madaxweynaha wejiyada badan ee Gabon, Cali Bongo, ee ka badbaaday isku day afgembi
Dadka qaar, wuxuu u yahay amiir edebta aanan la barin, oo u arka inuu xaq u leeyahay xukunka dalka saliidda qaniga ku ah ee Gabon; wuxuu mar ahaa fannaan, wuxuuna gashaday...
Nin Taiwan u dhashay oo ganaax ku mutaystay bisad uu boostada ku diray
Nin ayaa waxa uu ganaax gudaha Taiwan ugu mutaystay inuu bisad uusan doonayn uu ku diray adeega boostada degdega ah, sidaas ayaa la soo tabiyay. Sida lagu sheegay barta internetka ee wararka ee UDN, nin 33-jir ah oo lagu magacaabo Yang ayaa todobaadkan waxaa lagu ganaaxay NT$60,000 taas oo u dhiganta ($1,952); ama giniga Istarliinka (£1,522), taas oo uu ku mutaystay markii uu...
Trump oo wax weyn ka baddalay weerarradii Mareykanka ee Soomaaliya
Maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa tan iyo markii uu xafiiska la wareegay xoojiyay weerarrada xagga cirka ah ee ay Mareykanka ka fuliyaan dalka Soomaaliya, waxaana la filayaa in sannadkan 2019-ka ay sare u sii kacaan. La taliyaha dhinaca amaanka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ayaa mar uu bishii Disembar jeedinayay khudbad ku saabsaneyd howlgalladooda ka dhanka ah...
Haweenka Sacuudiga oo qaati ka taagan dowladdooda
Sacuudi Carabiya ayaa soo jiidatay indhaha caalamka sanadkii hore markii ay haweenka ka qaadday xayiraad muddo dheer saarneyd oo ku saabsan gawaari kaxeynta. Si kastaba, xayiraadaha haweenka saaran ayaa weli sidooda ah - gaar ahaan, "hannaanka hoggaanka ragga", aabbaha gabadha, walaalkeed, seygeeda amaba wiilkeeda ayaa gaara go`aannada ayada ku saabsan. Xayiraadahan ayaa waxaa...
Howlgallada dhowaan Ruushku uu ka sameeyay dalalka Sudan iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ayaa dhaliyay shaki weyn. Arrintaas ayaa ka dhalatay xiriirka dhaqaale ee cusub, qandaraaslayaal milatariga Ruushka ka socda ayaa muddooyinkan dambe saameyn ku lahaa labadaasi dal. Tan waxay xasaasi ka tahay Suudaan, oo beryahan dambe ay ka jiraan dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda....
Marxaladihii ay soo mareen wakiillada Qaramada Midoobay ee Soomaaliya
Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Qaramada Midoobay waxaa Soomaaliya si gaar ah ugu matalayay ergay khaas u ah xoghayaha guud ee mar walba xilka haya. Xilka wakiilka gaar ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya waxaa isku soo baddalay diblomaasiyiin fara badan oo mid walba uu howsha meel soo gaarsiinayay. Hase ahaatee waxaa intooda badan...
Hindiya: Xujeey Malaayin ah oo ka qeyb galaya Xaj u gaar ah
Malaayiin qof oo ku sugan magaalada Allahabad ee waqooyiga dalka Hindiya ayaa isu diyaarinaya inay ku qubaystaan biyaha barakaysan, taas oo qeyb ka ah kulanka diimeed ee ugu ballaaran caalamka ee Kumbh Mela. Saraakiisha ayaa waxay filayaan in 120 milyan oo qof ay kasoo qayb galaan debaldeggan socon doona 49 maalmood. Waxaa lagu tilmaama barkulanka ugu weyn ee dunida waxaan laga...